Maninona ny infografika no manao fitaovana marketing lehibe | Martech Zone
Maninona ny infografika no manao fitaovana marketing lehibe
Alakamisy Oktobra Oktobra 11, 2012 Alakamisy Oktobra Oktobra 11, 2012 Douglas Karr
Rehefa lasa malaza kokoa ny infografika dia manakiana tsikera an-taonina momba ny kalitaony sy ny maha-marina azy ireo koa izy ireo. Tiako ny infografika satria manome haino aman-jery maso hanazavana fanazavana izy ireo. Ny marina na tsia ny vaovao dia tantara iray hafa… ary ny sary tsy dia karohina loatra dia mety hanakihana tsikera an-taonina maro ary handratra ny lazan'ny orinasa manery azy. Rariny amin'ny fitiavana sy ny infografika ny rehetra. 🙂
Ny maso dia fanitarana ny ati-doha ary mihoatra ny antsasaky ny mponina no mianatra mianatra. Raha mieritreritra izany dia afaka mandray soa amin'ilay fanovana ny mpanonta sy ny orinasa. Misy ny fangatahana angona azo afindra haingana, mifanaraka ary mahaliana amin'ny maso.
Ity infographic, Maninona ny infografika no manao fitaovana marketing lehibe avy amin'ny mpamorona Infographic monina any UK, Neo Mammalian Studios, dia mihatra amin'ny varingarina tsara rehetra mahomby amin'ny fampiasana infografika… fitaovana fampitaovana sary mihetsika, fitomboan'ny fangatahana avy amin'ny mpihaino anao ary mpanelanelana mora zaraina! Io no trifecta amin'ny marketing amin'ny atiny. Mianara bebe kokoa amin'ny fomba manararaotra sy mampiroborobo ny infografikao.
Tags: Sary torohayvarotra infographicMarketing Infographicsneo mammalian studios
Enterprise Social Media Management avy amin'ny Syncapse
11 Okt 2012 amin'ny 8:09 PM
Plus infografika dia mamorona sary tena tsara izay hahasarika ny mpamaky indrindra ny tenako. Amin'ny fijerena ireo sary, dia azoko hoe inona no tian'i infographic holazaina.
Oct 12, 2012 amin'ny 2: 23 AM
Mampatsiahy ahy zavatra efa henoko tamin'ny tonian-dahatsoratry ny gazety taloha ela be: Ity infografika ity dia handray anjara lehibe amin'ny gazety marketing. Hita fa marina ho an'ireo lazaina ho haino aman-jery vaovao koa.